eNasha.com - एक्स मन्त्रः ब्याण्ड प्रोफाइल
एक्स मन्त्रः ब्याण्ड प्रोफाइल
नेपालमा पहिलो पटक मेटल ब्याण्डलाई लोकप्रियता दिलाउने पंक्तिभित्र एक्स-मन्त्र पर्दछ । सन् २०५८ सालमा स्थापित भएर पनि भित्रभित्रै लोकप्रिय भएको तर बाहिर चर्चामा पछि मात्र आउने ब्याण्ड मध्ये यो एक हो । मेटल गायन बुझ्न कठिन भए पनि यसले युवाहरुको आक्रोशलाई सङ्गीत र गायनमार्फत् प्रस्तुत गर्ने गरेको छ ।
सदस्यहरुः रोजेश- भोकल, राकेश- लिड गीतार, रितेश- बेस गीतार, राजन- ड्रम
ब्याण्डको स्थापनाः सन् २००१
स्थापनाको उद्देश्यः नेपालमा मेटल गायन वा सङ्गीतको चर्चा थिएन । आफ्नो रुचिको सङ्गीतलाई चर्चामा ल्याउन यसको स्थापना भएको थियो । (ज्ञात रहोस्, रोजेशका तीन भाइहरुद्वारा नै यो ब्याण्ड बनेको छ ।)
घरेलु ब्याण्डः अँ, जति पनि नयाँ साथीलाई ब्याण्डमा समावेश गर्‍यो, घरि के नमिल्ने घरि के नमिल्ने । बरु आफ्नै भाइहरुलाई समावेश गर्‍यो भने के कुरामा कुरा मिलेन भन्न थाहा हुन्छ भनेर घरेलु ब्याण्ड बनाएको हो ।
शुरुवातः गुच्चा खेलेर समय बिताउनु भन्दा सङ्गीतमा लाग्नु बेस ठानेर रोजेशले एक्स मन्त्र ब्याण्डको स्थापना गरेका थिए । शुरुमा त अन्य साथीहरु यसका सदस्य थिए तर पछि कोही साथी अमेरिका, कोही बेलायत र कोही चाहिँ अष्ट्रेलियातिर लागेपछि आफ्ना भाइहरु सम्मिलित ब्याण्ड बनाए ।
पहिलो प्रस्तुतिः ठमेलको जीए हलमा प्रस्तुत गरेको । पहिलो एल्बम निस्केको थियो, राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएकाले दोस्रो एल्बम ननिस्किउञ्जेल हाम्रो कपाल चिण्डे नै थियो । चिण्डे टाउको देखाएर कार्यक्रम देखायौँ । निकै प्रशंसित भयो ।
पहिलो कमाइः २०५५ सालमा ठमेलमा अंग्रेजी गीत बजाउन थालेपछि मेटल गीतमा रुचि बढ्न थाल्यो । २०५७ सालमा यो ब्याण्ड बन्यो । तर थोरै कमाइ थियो, अहिले त्यो रकम बताउँदा मान्छे हाँस्छन् ।
पहिलो एल्बमः क्राइङ फर पिस एल्बम निकालेका थियौँ । तर पूरा अंग्रेजीमा भएकाले उति धेरै बिक्री भएन ।
पहिलो ठूलो दर्शकः पोखरामा अहिलेसम्म कै सबैभन्दा बेसी दर्शक पाएको थियौँ, गएको दर्ुइ वर्षघि । त्यतिबेलै दमौलीमा हाम्रो ब्याण्डले पर्फ गरेको थियो । त्यहाँ हामीले गाउन थाल्दा चौरभरिका दर्शकले गीत सँगसँगै गाएको देख्दा अचम्ममा परियो । त्यहाँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ थिएन ।
धेरै कमाइ भएकोः त्यस्तो उल्लेख्य पैसा अहिलेसम्म पाएको छैन । तर धेरै वर्षघि चितवनमा नवीन के. भट्टर्राईको ब्याक्अप ब्याण्डको रुपमा पाएको पाँच सय रुपियाँ चाहिँ रोजेशका लागि प्रेरणाप्रद रकम थियो । उनले अफिसबाट हुने कमाइभन्दा यसबाट हुने कमाइमा थप आकर्षा देखेका थिए । तर पाकिस्तानी समूह जलको लागि टुँडिखेलमा काम गर्दा ६० हजार रुपियाँ लिएको रकम नै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी रकम थियो ।
दुःखलाग्दो क्षणः भारतीय पत्रिका आरएसजेले नेपालमा प्रतिभाशाली ब्याण्डमा एक्सब्याण्डलाई छानेको रहेछ । तिनीहरुले यो समूहलाई आफ्नो सिर्जना प्रस्तुत गर्न बोलाएको थियो तर जान नसकेकोमा अहिलेसम्म पछुतो लागिरहेको छ ।
ब्याण्ड फुट्ने त चलनै छ निः धेरै साथीहरु छुटिसके । कोही अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया गएकाले बाध्य भएर रोजेशका भाइहरु यो ब्याण्डमा समाहित हुनु पर्‍यो । दाजुभाइ भएमा समस्या सुल्झाउन सकिन्छ ।
ब्याण्डको शक्तिः दाजुभाइ हुनु नै सबैभन्दा सुन्दर र शक्तिशाली कुरा हो ।
भविष्यबारेः आठ नौ कक्षा पढेका भर्खरका भाइहरु हालै चेन्नेइमा आयोजित भएको विश्वस्तरीय रक ब्याण्ड प्रतियोगितामा दोस्रो फर्किर आएको देखेँ । ती साना भाइहरुको जिताइ देखेर मलाई ज्यादै खुशी लाग्यो र मलाई लाग्यो, सङ्गीतको भविष्य निकै उज्ज्वल छ ।
गायक सङ्गीतकार तातोपीरो रिलिज समुद्रपार क्या बात ! लुकेका कुरा कीर्तिमान अवार्ड नेपाली तारा भिडन्त विचार ट्रयाक बाहिर प्रेम र विवाह पेज थ्री उपलब्धि गीतकार गायिका बजारमा कन्सर्ट